Mitemo nemamiriro Law & More BV
Law & More muHague, (pano "Law & More”) Ikambani yakazvimiririra ine chikwereti chakaganhurirwa chakabatanidzwa pasi pemutemo wechiDutch, nechinangwa chekuita basa repamutemo. Law & More inhengo yeLCS network yemagweta.
Aya mamiriro akajairika anoshanda kune ese mirairo yemutengi kunze kwekunge pasati papedzwa chibvumirano chakabvumiranwa zvakanyorwa. Iko kushanda kwekuchengetedzwa kwese kwekutenga kana zvimwewo zvakajairika mamiriro emutengi zvakabudiswa pachena.
Yese mirairo inogamuchirwa uye inoitwa na Law & More. Iko kushanda kweChinyorwa 7: 407 ndima 2 yeDutch Civil Code haibatanidzwe.
Law & More inoita mabasa maererano nemitemo yekufambisa yeDutch Bar Association uye inoita, zvinoenderana nemitemo iyi yekuvanzika kune mutengi pasi pechibvumirano ruzivo rwakawanikwa.
Kutsiura Law & More usamboona pane zvemitero zvechero chiito kana kusiiwa, kunze kwekunge mutengi agamuchira imwe ziviso yakanyorwa Law & More. Kana zvine chekuita nekudiwa kwekubatidzwa Law & More mabasa akapihwa kumapati echitatu, Law & More inotaurirana pamberi nemutengi. Law & More haina mutoro wekubvuma kukundikana kwemhando ipi neipi yevatatu ava uye ane kodzero, pasina kubvunzana zvisati zvaitika uyezve panzvimbo yemumwe mutengi chero muganho wechikwereti pachikamu chevatatu vanobatanidzwa nacho.
Chero chikwereti che Law & More inokwana pamari yacho, mune ese kesi ichabhadharwa neinishuwarenzi yemutoro inishuwarenzi pamwe nemari yeinishuwarenzi inoenderana neicho chinobviswa. Kana, nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, pasina bhenefiti inopihwa pasi peinishuwarenzi yemutoro inishuwarenzi, chikwereti chataurwa pamusoro apa chinogumira pa € ​​5,000, -. Paunobvunzwa nezve (chivharo pazasi) na Law & More inishuwarenzi yemutoro inishuwarenzi yakapa ruzivo. Mutengi Law & More regedza mukuremekedza zvirevo zvevamwe mapato kusvika padanho rakanangana nebasa.
Zvekuitwa kwechibvumirano mutengi kune Law & More bhadhara muripo (pamwe neVAT). Mari yacho inotarwa zvichibva pahuwandu hwemaawa akashandiswa akawedzeredzwa neanoshanda maawa eawa. Kuzivisa kwe Law & More ne-e-mail kana kutumirwa neyakajairwa tsamba kune mutengi uye kubhadhara kunofanirwa kuitwa mukati memazuva gumi nemana mushure meinvoice zuva.
Kupfuura nguva ino, mutengi ari pamutemo kutadza uye ane chikwereti che1% pamwedzi. Basa rinoitwa rinogona kuiswa chero nguva nguva ne Law & More mhosva. Law & More ane kodzero mutengi kukumbira kubhadharwa kwepamberi.
Kuramba kuwanda kweiyo invoice kunofanirwa kuendeswa mune chirevo chakanyorwa mukati memazuva gumi nemana mushure mezuva reinvoice pa Law & More, kukundikana uko chirevo chekupedzisira pasina kuratidzira chinogamuchirwa.
Hukama hwepamutemo pakati pemutengi uye Law & More iri pasi pemutemo wechiDutch.
Nharo dzese dzinokonzerwa nehukama hwepamutemo dzinozotongwa nedare rinokwanisa muThe Hague.
Zvese zvirevo zvinogona kukumbira mutengi kupokana nazvo Law & More, inopera mune chero ipi zvayo gore rimwe mushure mezuva iro mutengi akazoziva kana aigona kunge aiziva zvine hungwaru nezvekuvapo kwekodzero idzi.